XOG: Xubno iska casili doona Guddiga baaraya arinta Qalbi dhagax – XAMAR POST
Guddoonka Golaha shacabka ayaa Guddi gaar ah u magacaabay arinta Qalbi dhagax, waxayna kasoo baaraandegi doonaan qaraarkii Xukuumadda gaartay ee ku saabsanaa dhiibidii C/kariin Qalbi Dhagax, iyadoo guddigan oo ka kooban 15 xubnood oo Xildhibaano ah laga sugayo inay ugu dambeyn warbixin ka keenaan kiiskan 10-ka bisha October.
Hadaba Warbaahinta Xamarpost ayaa ogaatay in Masuuliyiin badan ay doonayaan inay iska casilaan xubinimada guddigan sida uu sameeyay Xildhibaan Odawaa.
Guddigan ayaa la ogaaday inuu sameeyay Madaxweyne Farmaajo, waxaana magacaabista Jawaari ay aheyd mid qorsheysan, oo hore loo sii diyaariyay, waxaana sidaas oo kale qoran oo la diyaariyay natiijada ay soo saari doonaan oo la helay inay ku raaci doonaan go’aanka xukuumadda.
Masuuliyiinta iscasili doona oo la hadlay Xamarpost.com ayaa u sheegay sababta ay isku casilayaan inay tahay go’aanka guddiga oo la sii diyaariyay iyo iyagoo diidaya in sumcadooda lagu dilo qorshahan ay wadato dowlada Federaalka Soomaaliya, waxayna sheegeen inay ka ka cudur daaran doonaan xubinimada Guddiga loo saaray kiiskii Qalbi Dhagax iyo qaraarkii Xukuumadda ka qaadatay 6-dii bishan.
CADEYN: R/wasaare Kheyre oo lacag ku bixiyay in la Burburiyo Kiiskii loogu eedeeyay Al shabaabnimada